လမ်းပြကြယ်: မြန်မာလူမျိုးနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားနေသောဝက်ဆိုက်အား ဝိုင်းဝန်းအရေးယူသင့်ပြီ
မြန်မာလူမျိုးနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားနေသောဝက်ဆိုက်အား ဝိုင်းဝန်းအရေးယူသင့်ပြီ
http://messengerforbuddhist.blogspot.com/ တွင်မြန်မာလူမျိုး တို့ကိုသာမက မြန်မာတို့၏ အထွတ်အမြတ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပါ အလွန်တရာ ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဖြင့် ဆဲရေးပုတ်ခတ် ရေးသားနေ သည်မှာ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါ ။
အင်တာနက် ခေက် ဖြစ်၍ လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပိုင်ခွင့် ရှိသော်လဲ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို တစ်ဖက်သတ် ပုတ်ခတ် စော်ကား ၍မရပါ ။
အဆိုပါဆိုက် သည် Google (Blogger.com) မှချမှတ်ထား သော " Terms & Conditons " များကို ချိုးဖောက် နေသည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည် ။
Blogger.com ၏စည်းကမ်း များအရ ဤ ကဲ့သို့သောဆိုက်များ အားခွင့်မပြုပါ ။
အား ဤနေရာ တိုင်ကြားခြင်းဖြင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကို ဝိုင်းဝန်း ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နိုင်ကြစေရန် အသိပေးနှိုးဆော် လိုက်ရပါသည် ။
( Blogger's policy )
- Blogger strongly believes in freedom of speech.
While Blogger values and safeguards political and social commentary,
material that promotes hatred toward groups based on
race or ethnic origin, religion, disability, gender, age, veteran status, or sexual orientation/gender identity is not allowed on Blogger.
address - http://www.google.com/support/blogger/bin/request.py?contact_type=h...
တိုင်ကြားရမည့်နေရာ - http://www.google.com/support/blogger/bin/request.py?contact_type=h...
တိုင်ကြားရမည့်လိပ်စာ - http://messengerforbuddhist.blogspot.com/